"အီရန်နိုင်ငံ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"အီရန်နိုင်ငံ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၅:၀၇၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မူ
၃၉၈ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
Typo and2links.
၀၅:၄၉၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (+Category:အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံများ; ±Category:နိုင်ငံ→Category:အီရန်နိုင်ငံ using HotCat)
၀၅:၀၇၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(Typo and2links.)
ယခင်က ပါးရှားနိုင်ငံဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သော အီရန်နိုင်ငံသည်
ရှေးခေတ် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော အင်ပိုင်ယာနိုင်ငံ
ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့လေသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း
၂၅ဝဝ ကျော်က ပါးရှားအင်ပိုင်ယာနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒုမြစ်မှ အနောက်ဘက် ဥရောပတိုက်
ဒန်းညုမြစ်အထိ ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ထိုအခါက ပါးရှားနိုင်ငံ
တွင် ခိုင်ခံ့သော မြို့ကြီးများ၊ ခမ်းနားတင့်တယ်သော နန်းတော်
များ၊ စနစ်တကျ ဖောက်လုပ်ထားသော ဆည်မြောင်းများ အစ
ရှိသည်တို့ဖြင့် ကြီးကျယ် ထင်ရှားလေသည်။ ဇိုရိုအက်စတာ
အယူဝါဒသည်လည်းကောင်း၊ အိုမာခယမ်၏ ကဗျာနှင့်
မြောက်မြားစွာသော သမိုင်းပုံပြင်၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တို့သည်လည်းကောင်း
ပါးရှားနိုင်ငံမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်။ ကမ္ဘာကျော်
ပါးရှင်းကော်ဇော်နှင့် စောင်ထွက်ရာ ဒေသလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အီရန်နိုင်ငံသည် အီရန်ကုန်းပြင်မြင့် အနောက်
ပိုင်းဖြစ်၍ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းမိုင်ပေါင်း
၆၃၆၂၉၄ ရှိကာ လူဦးရေမှာ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေအရ
၃ဝ၅၅ဝဝဝဝ ယောက်ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင် အာဖဂန်န
စ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် အီရတ်နှင့်
တူရကီနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက် တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင်
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ နှင့်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ အသီးအသီး
တည်ရှိကြသည်။ အီရန်နိုင်ငံမြောက်ဘက် နယ်နမိတ်
တစ်လျှောက်တွင် အယ်လဗုဇ တောင်တန်းများရှိ၍ တောင်တန်း
ရှိ ဒင်မာ တောင်ထိပ်(ပေ ၁၈၆ဝဝ)သည် အီရန်နိုင်ငံတွင်
အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ဖြစ်၏။ ဇာဂရို့တောင်တန်းသည် အီရန်
နိုင်ငံနှင့် အီရတ်နိုင်ငံတို့ကို ပိုင်းခြားတည်ရှိပြီးလျှင် အနောက်
ဘက်မှ တောင်ဘက်ပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်သို့
ကွေး၍ ဆင်းလာသည်။ ထိုတောင်တန်းနှစ်ခုတို့သည် အီရန်
နိုင်ငံ အနောက် မြောက်ပိုင်းတွင် အာမီးနီးယန်း ကုန်းပြင်မြင့်
အဖြစ် ပေါင်းစပ်မိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အီရန်နိုင်ငံသည်
တောင်တန်းများ ရံလျက်ရှိသော ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသဖြစ်သည်။
မြေပြန့်ပိုင်းဟူ၍ အနောက်တောင်ထောင့်တွင်ရှိသော ကူးဇစ္စတန်
အီရန်နိုင်ငံတွင် ကြီးကျယ်ထင်ရှားသောမြစ်ဟူ၍ မရှိချေ။
များသောအားဖြင့် မြစ်များသည် နိုင်ငံတွင်းဘက် သို့ စီးဆင်း
ကြပြီးလျှင် သဲကန္တာရထဲ၌ ခန်းခြောက် ပျောက်ကွယ် သွားကြ
လေသည်။ အိုင်ကြီးများသည်လည်း ရေငန်အိုင်များ ဖြစ်ကြ
သည်။ အနောက်မြောက်စွန် အဇာဘိုင်ဂျန်နယ်ရှိ ရီဇာအီးယား
အိုင်သည် အကြီးဆုံး ဖြစ် သည်။ အိုင်များသည် နွေဦးပေါက်
ရာသီတွင် ရေပြည့်လာပြီးနောက် နွေအခါ၌ ခန်းခြောက်ကုန်ကြ
အီရန်နိုင်ငံရာသီဥတုသည် ခြောက်သွေ့၏။ ဆောင်းရာသီ
တွင် အေး၍ နွေရာသီတွင် ပူပြင်းသည်။ ဆောင်းရာသီ၌
မိုးအနည်းငယ်သာရွာသည်။ တောင်များပေါ်တွင် ဆီးနှင်းထူထပ်
စွာ ကျသည်။ မိုးအများဆုံး ရွာသောဒေသမှာ အယ်လဗုဇ
အီရန်ကုန်းပြင်မြင့် သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ခြောက်သွေ့သော
သဲကန္တာရဖြစ်၍ အီရန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းသည် ဆားပေါက်လျက်
ရှိသော သဲကန္တာရဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်မြို့ကြီးများနှင့် ယခု
ခေတ်မြို့ကြီးများသည် အနောက်ပိုင်း၌ တည်ရှိကြသည်။ အီရန်
နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်သောဒေသ အနည်းငယ်မျှသာ
ရှိသော်လည်း လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်တို့သည် တောင်သူလယ်
သမားများ ဖြစ်ကြသည်။ အီရန်တောင်သူလယ်သမားတို့အတွက်
အကြီးဆုံးအခက်အခဲမှာ စိုက်ခင်းများတွင် ရေရဖို့ပင် ဖြစ်
သည်။ ထိုကြောင့် လယ်ယာများကို ရေသွင်း စိုက်ပျိုးကြရ
သည်။ သို့ရာတွင် မိုးအလွန်ပါး၍ မြစ်ရေ ချောင်းရေကိုလည်း
အားမကိုးရသဖြင့် တောင်ပေါ်မှ ဆီးနှင်းအရည်ပျော်၍ ကျဆင်း
သောရေကို မှီခိုအားထားကြရလေသည်။ ထိုရေအငွေ့ပျံခန်း
ခြောက်ခြင်း မရှိရအောင် မြေအောက်ဥမင်များ တူးဖောက်၍
လယ်ကွက်များရှိရာသို့ ခရီးဝေးစွာ ယူဆောင်ကြရသည်။
စိုက်ပျိုးသီးနှံပင်များမှာ ဂျုံ၊ မုယော၊ ဆန်စပါး၊ ဝါ၊ ဆေး၊
သကြား၊ မုန်လာ၊ သစ်သီးတို့ ဖြစ်သည်။
လူဦးရေ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် အိုးအိမ်အတည်တကျ မရှိဘဲ
မိမိတို့၏ တိရစ္ဆာန်များဖြင့် တောင်တန်း ဒေသ၌ လှည့်လည်
နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ကျန်လေးပုံတစ်ပုံခန့်သော
လူဦးရေတို့သည်ကား မြို့များ၌ နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး ဓနအင်အားမှာ ရေနံဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် ရေနံအထွက်
ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရေနံတွင်းများကို မြောက်ဘက် ကက်စပီယံပင်လယ်မှ တောင်ဘက် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အထိ ကျယ်ပြန့်
သောဒေသတစ်လျှောက်တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပါးရှင်းပင်လယ်
ကွေ့ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသော အာဗာဒန်မြို့၌ ရေနံချက်
စက်ရုံကြီး ရှိသည်။ ကူးဇစ္စတန် သဲကန္တာရအနီးရှိ ရေနံတွင်း
များမှ ရေနံကို အာဗာဒန်မြို့သို့ ပြွန်များဖြင့် ယူဆောင်လျက်
ရှိသည်။ ယခင်က အီရန်နိုင်ငံ ရေနံလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံခြား
သား ဗြိတိသျှတို့ အအုပ်အချုပ်ခံ အင်္ဂလို-အီရေနီးယန်း ရေနံ
ကုမ္ပဏီ၏လက်ထဲတွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်၌ အစိုးရ
က ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ပါး အီရန်နိုင်ငံ
သည် ခရုမိုက်၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ ခဲ၊ မန်ဂနိ၊ သွပ်၊ ကန့်နှင့်
မီးသွေးစသည့် ဓာတ်သတ္တုတို့ဖြင့်လည်း ပေါကြွယ်ဝ သည်။
ကော်ဇော ရက်လုပ်ခြင်းသည်လည်း ထင်ရှားသော လုပ်ငန်း
ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ တာဗရိမြို့၊ ကာမန်းမြို့နှင့်ကာရှန်းမြို့
တို့သည် ကော်ဇောလုပ်ငန်း၌ ထင်ရှားသည်။
အီရန်နိုင်ငံသားတို့သည် များသောအားဖြင့် အစ္စလာမ်
အယူဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ရှိအာဂိုဏ်းခေါ် အစ္စလာမ်အယူဝါဒဂိုဏ်း
ထွန်းကားရာဒေသ ဖြစ်သည်။ မူလတန်း ပညာကို မသင်
မနေရအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် တဟီရန်း
တဟီရန်းမြို့သည် အီရန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်၍ အယ်လဗုဇ
တောင်ခြေတွင် ပေ ၄ဝဝဝ ကုန်းမြင့်ပေါ်၌ တည်ရှိသည်။
ကက်စပီယံပင်လယ်နှင့် မိုင် ၇ဝ ခန့်သာ ဝေးသည်။ ၁၂ ရာစု
နှစ်အတွင်းက မြို့ကို တည်ခဲ့ပြီး နောက် ၁၇၈၈ ခုနှစ်တွင်
ရှေးအခါက တဟီရန်းမြို့သည် အရှေ့တိုင်း မြို့တစ်မြို့
အသွင်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် နန်းတက်သော
ရီဇာရှားဘုရင်နှင့်သားတော် လက်ရှိရှားဘုရင်တို့ လက်ထက်၌
ခေတ်မှီမြို့တော်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ မြို့တွင်း၌ လမ်းမ
ကျယ်များကို စနစ်တကျ ဖောက်လုပ်၍ အစိုးရအဆောက်
အအုံများကိုလည်း ရှေးပါးရှင်းဗိသုကာပုံစံအရ ဆောက်လုပ်
ထားရှိလေသည်။ အီရန်နိုင်ငံရှိ အခြားမြို့ကြီးများနှင့် မီးရထား
လမ်း အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ လေကြောင်းခရီးအတွက်
လေဆိပ် လည်းရှိသည်။ လူဦးရေ ၂၇၁၉၇၃၁ ယောက်
(၁၉၇၂) နေထိုင်သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
အတွင်းက ရုရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် စတာလင်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ
သမ္မတရူးဇဗဲ့နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ချာချီတို့သည်
တဟီးရန်းမြို့တော်၌ ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့
အခြားထင်ရှားသောမြို့ကြီးများမှာ တာဗရိမြို့၊ အစ္စဖာဟန်း
မြို့၊ မားရှတ်မြို့တို့ ဖြစ်ကြသည်။ တာဗရိမြို့သည် အဇာဘိုင်ဂျန်
၏ မြို့တော်ဖြစ်၍ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အချုပ်အခြာ
ဌာနဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၄ဝ၃၄၁၃ (၁၉၇၂)ယောက်ခန့် နေထိုင်သည်။
အစ္စဖာဟန်းမြို့သည် မြေဩဇာကောင်းသော အိုအေးဆစ်
ဒေသ၌ တည်ရှိ၍ ရှေးအခါက ပါးရှားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့
ဖူးသည်။ ဆေး၊ ဝါ၊ ဘိန်း၊ ဆန်စပါးနှင့် ကော်ဇောများထွက်
သည်။ လူဦးရေ ၄၂၄ဝ၄၅ (၁၉၇၂) ယောက်ခန့်နေထိုင်သည်။
မားရှတ်မြို့သည် အီရန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အိုအေးဆစ်
ဒေသ၌ တည်ရှိပြီးလျှင် အီရန်အစ္စလာမ်ဂိုဏ်းဝင်တို့၏ အယူ
ဝါဒနှင့်ဆိုင်၍ အထွက်အမြတ်ထားသောမြို့ ဖြစ်ပေသည်။
ထိုမြို့တွင် မိုဟာမက်၏ အဆက်အနွယ် ဖြစ်သော အိမံရီဇာ၏
သင်္ချိုင်း တည်ရှိသည်။ လူဦးရေ ၄ဝ၉၆၁၆ (၁၉၇၂) ယောက်
၁၉၃၅ ခုနှစ် မတိုင်မီက အီရန်နိုင်ငံသည် ပါးရှားနိုင်ငံဟူ၍
ခေါ်တွင်သည်။ ဘီစီ ၁ဝဝဝ ခန့်မှစ၍ ထိုဒေသတွင် အဆီးရီး
ယန်းလူမျိုး၊ မိဒလူမျိုးတို့ ကြီးစိုးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၅၅ဝ
ခန့်လောက်တွင် ပါးရှင်း လူမျိုးခေါင်းဆောင် ဆိုင်းရပ်သည်
မိဒလူမျိုးတို့ကို အောင်မြင်ပြီးနောက် ပါးရှားအင်ပိုင်ယာကို
ဆိုင်းရပ်ဘုရင်ကြီး၏ လက်ထက်တွင် ပါးရှားနိုင်ငံသည်
အရှေ့ဘက် အိန္ဒိယ ပြည်နယ်စပ်မှ အနောက်ဘက်
ဆိုင်းရပ်၏မြေးတော် ဒါးရီးယပ် ဘုရင်
လက်ထက်သို့ရောက်လာသောအခါ တောင်ဘက် အီဂျစ်ပြည်သို့
တိုင်အောင် အာဏာပြန့်နှံ့လျက် ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဂရိတို့နှင့်
ဖြစ်ပွားသော ပါးရှင်းစစ်ပွဲ၌ ပါးရှင်းတို့ အရေးနိမ့်ခဲ့သဖြင့်
အာဏာကျဆင်း ခဲ့ရာ နောက်ဆုံး ဘီစီ ၃၃၃၃ ခုနှစ်တွင်
အယ်လက်ဇန္ဒာ-သ-ဂရိတ်သည် ပါးရှားနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို
( အယ်လက်ဇန္ဒာ- သ-ဂရိတ်။)
ဂရိတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ခန့်
ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပါးရှားနိုင်ငံသည် ပါးသီယန်ဘုရင်များ
လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိပြန်သည်။ ထိုနောက် တိုင်းရင်းသား
စဆာနစ်မင်းများက အေဒီ ၂၂၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပါးရှားနိုင်ငံကို
၁၉၃၅ ခုနှစ် မတိုင်မီက အီရန်နိုင်ငံသည် ပါးရှားနိုင်ငံဟူ၍ ခေါ်တွင်သည်။ ဘီစီ ၁ဝဝဝ ခန့်မှစ၍ ထိုဒေသတွင် အဆီးရီးယန်းလူမျိုး၊ မိဒလူမျိုးတို့ ကြီးစိုးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၅၅ဝ ခန့်လောက်တွင် ပါးရှင်းလူမျိုးခေါင်းဆောင် [[မဟာဆိုင်းရပ်စ်]]သည် မိဒလူမျိုးတို့ကို အောင်မြင်ပြီးနောက် ပါးရှားအင်ပိုင်ယာကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆိုင်းရပ်စ် ဘုရင်ကြီး၏ လက်ထက်တွင် ပါးရှားနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက် အိန္ဒိယ ပြည်နယ်စပ်မှ အနောက်ဘက် အီးဂျီးယန်းပင်လယ်ထိ ကျယ်ပြန်လေသည်။ ဆိုင်းရပ်၏ မြေးတော် ဒါးရီးယပ်စ် လက်ထက်သို့ရောက်လာသောအခါ တောင်ဘက် အီဂျစ်ပြည်သို့တိုင်အောင် အာဏာပြန့်နှံ့လျက် ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဂရိတို့နှင့် ဖြစ်ပွားသော ပါးရှင်း စစ်ပွဲ၌ ပါးရှင်းတို့ အရေးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် အာဏာကျဆင်းခဲ့ရာ နောက်ဆုံး ဘီစီ ၃၃၃၃ ခုနှစ်တွင် [[မဟာအလက်ဇန္ဒား]]သည် ပါးရှားနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက် အုပ်စိုးလေသည်။
အုပ်စိုးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖန် အေဒီ ၆၄၁ ခုနှစ်တွင် အာရပ်တို့
လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။ ထိုမင်းများ လက်ထက်
တွင် ပါးရှားနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ရောက်ရှိလေသည်။
၁၂ ရာစုနှစ်တွင် ပါးရှားနိုင်ငံကို မွန်ဂိုဘုရင်များက လည်း
၁၆ ရာစုနှစ်အတွင်း ပါးရှားနိုင်ငံ၌ ဆူဖီ မင်းဆက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာ အဗ္ဗ-သ-ဂရိတ် ဘုရင် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံသည် စည်ပင်ဝပြော၍ သုခုမပညာရပ်များလည်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထိုမင်းဆက်တွင် နောက်ဆုံး ဘုရင်ဖြစ်သော နဒါးရှားသည် တူရကီနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းသို့ စစ်ချီ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ခါဂျာမင်းဆက်က ၁၇၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၅ ခုနှစ်အထိ အုပ်စိုးသည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ရီဇာခန် ပါးလာဗီက ရှားဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့လေသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အီရန်နိုင်ငံသည် ကြားနေနိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရီဇာခန်ဘုရင်သည် ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်အားပေးသဖြင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ ဗြိတိသျှနှင့် ရုရှားတပ်များက အီရန်နိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်း၍ ရှားဘုရင်ကိုလည်း ထီးနန်းမှချခဲ့ကြသည်။ သားတော် မိုဟာမက် ရီဇာ ပါးလာဗီက အီရန်ထီးနန်းကို ဆက်ခံအုပ်စိုးလေသည်။ အီရန်နိုင်ငံသည် ရှားဘုရင် မိုဟာမက် ရီဇာ ပါးလာဗီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ခေတ်မီအင်အားထက်မြက်သည့် နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်အောင် စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးတော်လှန်မှုကြီးတစ်ရပ်ကို ဆင်နွဲလျက်ရှိသည်။ ရှားဘုရင်၏ ပြုပြင်မှုများတွင် မြေယာစနစ် ပြုပြင်ရေး၊ မြို့ကြီးများတွင် စက်မှု လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရေး၊ တိုင်းသူပြည်သားတို့ စာပေတိုးတက် တတ်မြောက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိရေးတို့ ပါဝင်သည်။ အီရန်နိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံက ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် အဇာဘိုင်ဂျန်နယ်ကို သိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုကို တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့၏။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အီရတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ဖြစ်သော ရှက်တယ် အာရပ်မြစ်ဝကျယ် အတွင်း ကူးသန်းသွားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိုနိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားခဲ့ရ၏။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် နယ်စပ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပါးရှင်းကွေ့ အတွင်း ကြီးစိုးရန်အတွက် အင်အားချင်းပြိုင်မှုကို ဖော်ပြလေသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အီရန်နိုင်ငံသည် အာရပ်စော်ဘွားနယ်ပေါင်းစု နိုင်ငံပိုင် ကျွန်းသုံးကျွန်းကို သိမ်းယူခဲ့၏။ အီရန်နိုင်ငံသည် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်လွန်များတွင် ရေနံတင်ပို့ ရောင်းချမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ စစ်လက်နက်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူကာ ယင်း၏ စစ်တပ်ကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်ပေးခဲ့လေသည်။ အီရန်နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင့်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်၍ ဝန်ကြီးချုပ် ခေါင်းဆောင်သော ကက်ဘိနက်အဖွဲ့၌ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်ရှိသည်။ ရှားဘုရင်က ဝန်ကြီးချုပ်ကို ခန့်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည် လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက် တင်မြောက်ရသော ပါလီမန်လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရသည်။ အောက်လွှတ်တော် တွင် အမတ်ဦးရေ ၂ဝဝ ရှိ၍ လူထုမဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ရသည်။ အထက်လွှတ်တော်တွင် အမတ်ဦးရေ ၆ဝ ရှိသည့်အနက် ထက်ဝက်ကို ရှားဘုရင်က ရွေးချယ်ခန့်ထားသည်။ ရှားဘုရင်တွင် ပါလီမန် လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိ၍ ဘဏ္ဍာရေး ဥပဒေကြမ်းများကို ထပ်မံ စဉ်းစားရန် ပါလီမန်သို့ ပြန်လွှဲနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ပါလီမန်က အတည်ပြုပြီးသော အခြားဥပဒေကြမ်းများကိုကား လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာရလေသည်။<ref>မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၄)</ref>
ကောင်း၊ ၁၈ ရာစု နှစ်ဦးပိုင်းတွင် တူရကီနှင့်ရုရှားတို့က
နောက်ဆုံး ၁၆ ရာစုနှစ်အတွင်း ပါးရှားနိုင်ငံ၌ ဆူဖီ
မင်းဆက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာ အဗ္ဗ-သ-ဂရိတ် ဘုရင်
လက်ထက်တွင် နိုင်ငံသည် စည်ပင်ဝပြော၍ သုခုမပညာရပ်
များလည်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထိုမင်းဆက်တွင် နောက်ဆုံး
ဘုရင်ဖြစ်သော နဒါးရှားသည် တူရကီနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်
ပိုင်းသို့ စစ်ချီ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ခါဂျာမင်းဆက်
က ၁၇၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၅ ခုနှစ်အထိ အုပ်စိုးသည်။ ၁၉၂၅
ခုနှစ်တွင် ရီဇာခန် ပါးလာဗီက ရှားဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းကို
သိမ်းပိုက်ခဲ့လေသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အီရန်နိုင်ငံ
သည် ကြားနေနိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရီဇာ
ခန်ဘုရင်သည် ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်
အားပေးသဖြင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ ဗြိတိသျှနှင့်
ရုရှားတပ်များက အီရန်နိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက် ထိန်းသိမ်း၍
ရှားဘုရင်ကိုလည်း ထီးနန်းမှ ချခဲ့ကြသည်။ သားတော်
မိုဟာမက် ရီဇာ ပါးလာဗီက အီရန် ထီးနန်းကို ဆက်ခံအုပ်စိုး
အီရန်နိုင်ငံသည် ရှားဘုရင် မိုဟာမက် ရီဇာ ပါးလာဗီ
ဦးဆောင်မှုဖြင့် ခေတ်မီအင်အားထက်မြက်သည့် နိုင်ငံ
တစ်ရပ်ကို ဆင်နွဲလျက် ရှိသည်။ ရှားဘုရင်၏ ပြုပြင်မှု
များတွင် မြေယာစနစ် ပြုပြင်ရေး၊ မြို့ကြီးများတွင် စက်မှု
လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရေး၊ တိုင်းသူပြည်သားတို့
စာပေတိုးတက် တတ်မြောက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ အခွင့်
အရေး ပိုမိုရရှိရေးတို့ ပါဝင်သည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံက ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်
အဇာဘိုင်ဂျန်နယ်ကို သိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုကို တွန်းလှန်
နိုင်ခဲ့၏။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အီရတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ဖြစ်သော
ရှက်တယ် အာရပ်မြစ်ဝကျယ် အတွင်း ကူးသန်းသွားခွင့်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ထိုနိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားခဲ့ရ၏။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်
နယ်စပ်တိုက်ခိုက် မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပါးရှင်းကွေ့
အတွင်း ကြီးစိုးရန်အတွက် အင်အားချင်းပြိုင်မှုကို ဖော်ပြလေ
သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အီရန်နိုင်ငံသည်
အာရပ်စော်ဘွားနယ်ပေါင်းစု နိုင်ငံပိုင် ကျွန်းသုံးကျွန်းကို
အီရန်နိုင်ငံသည် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်လွန်များတွင် ရေနံတင်ပို့
ရောင်းချမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ
စစ်လက်နက်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူကာ ယင်း၏
စစ်တပ်ကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်ပေးခဲ့လေသည်။
အီရန်နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင့်အုပ်ချုပ်
ရေးဖြစ်၍ ဝန်ကြီးချုပ် ခေါင်းဆောင်သော ကက်ဗီနက်အဖွဲ့၌
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်ရှိသည်။ ရှားဘုရင်က ဝန်ကြီးချုပ်ကို
ခန့်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည် လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်
်တင်မြေ|ာက်ရသော ပါလီမန်လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရသည်။
အောက်လွှတ်တော် တွင် အမတ်ဦးရေ ၂ဝဝ ရှိ၍ လူထုမဲဆန္ဒ
ဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရသည်။ အထက်လွှတ်တော်တွင်
အမတ်ဦးရေ ၆ဝ ရှိသည့်အနက် ထက်ဝက်ကို ရှားဘုရင်က
ရွေးချယ်ခန့်ထားသည်။ ရှားဘုရင်တွင် ပါလီမန် လွှတ်တော်ကို
ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိ၍ ဘဏ္ဍာရေး ဥပဒေကြမ်းများကို ထပ်မံ
စဉ်းစားရန် ပါလီမန်သို့ ပြန်လွှဲနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ပါလီမန်က
အတည်ပြုပြီးသော အခြားဥပဒေကြမ်းများကိုကား လက်မှတ်
ရေးထိုးကာ ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာရလေသည်။<ref>မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၄)</ref>
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/436372" မှ ရယူရန်